စစ်တပ်အပေါ် မှာ ပုံမှန်အခြေအနေဆိုတာ
အာဏာရှင်တွေရဲ့ စိုးရိမ်မှု၊ အာဏာမက်မှုနဲ့..၊
ဘယ်လို ကွပ်ကဲမလဲ.. ဘယ်လိုရိုက်သွင်းမလဲ.
အဲဒီမှာမှ ဦးနေ၀င်းက ဘောင်းဘီချွတ်ခဲ့တဲ့အတွက်..၊
နှစ် ၂၀ ကျော်လုံးလုံး..
အဲဒီမှာ ပြည်သူက ခါးသီးတယ်.၊
အဲဒီခေတ်က ဗိုလ်ချုပ်ကို ချောင်ထိုးခဲ့တာတစ်ခုတည်းနဲ့
တင်.. သူ့ Level က သူ့အနေအထားက..ပွဲပြတ်သွားတာပေါ့..၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ ..ဒီအလုပ်ကို မလုပ်သင့်ဘူးလေ..၊
ဒါပေမဲ့ အာဏာရှင်ကို ပေါ်တင်ပြောတယ်..၊
စစ်တပ်နဲ့ အာဏာရှင်ကို အတူတူပဲလို့ ထင်တဲ့သူတွေက..
အဲဒီလိုဖြစ်အောင်ကို လဲ နောက်ပေါက်တွေကို.
ရိုက်သွင်းထားတယ်..၊ မှိုင်း နံ့တွေ ရှူခိုင်းထားတယ်..၊
နောက်တစ်ခုက ဒေါ်စုက လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ခဲ့ရင်တော့
တကယ်ဆို နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ မဟာဗျူဟာအမြင် ကို..
စနစ်တကျနဲ့ လေ့လာ ကြတဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေဆိုရင်
မဟာဗျူဟာအမြင်နဲ့ အင်္ဂံလိပ်နဲ့ ဂျပန်ကြားမှာ..
တစ်သက်လုံး ကိုယ့်ရဲ့ Boss တွေကြိုက်မဲ့
တကယ့် နိုင်ငံရေးဇတ်ခုံပေါ်ရောက်တာနဲ့ ကွဲရောမလား..၊
ကျွန်တော်ကတော့ လက်တွေ့ဆန်ဆန် ဖြစ်ချင်တယ်..၊